Muuri News Network » Dhageyso:Hadal heynta Muqdisho oo noqotay Donald Trump-ka Somalia oo isku soo sharxay Madaxweynenimo
Dhageyso:Hadal heynta Muqdisho oo noqotay Donald Trump-ka Somalia oo isku soo sharxay Madaxweynenimo
Dec 26, 2016 - Comments off
Kadib shaacin oo shaaciye maalinimadii shalay musharixnimadiisa Ganacsade C/llaahi Cali Axmed laguna naanayso “Caddow Cali Gees” ayaa siweyn looga hadal hayaa guud ahaan soomaaliya iyo caalamka waxaana si gaar ah looga hadal hayaa caasimada.
Ganacsadaan qaraabada dhow la ah madaxweynaha haatan talada haayo ayaa lasheegaya in sharixitaankiisa halis weyn ku tahay madaxweynaha haatan jooga ee Xasan sheekh.
Murashaxa Madaxweyne ee C/llaahi Cali Axmed “Caddow Cali Gees” oo haysta Dhalashadda dalka Maraykanka waa milyaneer galangal badan leh, isla markaana saaxiibo badan ku dhex leh Aqalka Hoose ee Barlamaanka cusub.
SIdo kale murashaxa Donald Trump-ka Somalia waxaa la sheegaa inuu leeyahay 5 Diyaaradaha Qaadka iyo kuwa Rakaabka iyo Maraakiib Xamuul, wuxuuna lacag badan ka abuurtay muddadii uu xilka ka hayey Dekedda Muqdisho, ka hor inta aan Shirkadda Albeyrak ee Turkiga la wareegin Maamulka Hawlaha Dekedda Muqdisho.
Ganacsade Caddow Cali Gees (Donald Trump)-ka Somalia waxa uu hami ka qabaan inuu sidii Madaxweynaha La-doortay ee Maraykanka, Donald Trump oo kale ugu guuleysto Doorashadda Madaxtinimadda Somalia, isagoo doonaya inuu Xeellad Dhaqaale iyo afgobaadsi Xildhibaanimo kaga gudbo Loolanka Kursiga Madaxweynaha 10-aad ee JFS.